Akụkọ - Ọnụahịa ihe na-arị elu
Kemgbe njedebe nke afọ gara aga, nke metụtara ihe dịka mbelata ikike na mmekọrịta mba ụwa siri ike, ọnụahịa nke ihe ọkụkụ arịala elu. Mgbe ezumike CNY gasịrị, "mmụba mmụba ọnụahịa" bilitere ọzọ, ọbụlagodi karịa 50%, ọbụnakwa ụgwọ ọrụ ndị ọrụ abawanyela. "... A na - ebute nrụgide site na elu" mmụba ọnụahịa "na ụlọ ọrụ ndị dị ala dị ka akpụkpọ ụkwụ na uwe, ngwa ụlọ, ngwa ụlọ, taya, ogwe, wdg, ma nwee ogo mgbanwe dị iche iche.
Applọ ọrụ ngwa ọrụ ụlọ: Enwere nnukwu ina maka akụrụngwa buru ibu dị ka ọla kọpa, aluminom, igwe, plastik, wdg. Mgbe ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke njedebe nke afọ, nkwalite ahịa na ọnụahịa na-abawanye "ofufe ọnụ."
Industrylọ ọrụ akpụkpọ anụ: Ọnụahịa nke ihe ndị dị ka EVA na roba arịgoro n'ofe osisi ahụ, ọnụahịa nke PU akpụkpọ anụ na ihe microfiber na-aga ịkwaga.
Industrylọ ọrụ textile: ihe e kwuru na akụrụngwa dịka owu, yarn owu, na polyester staple fiber arịgoro nke ọma.
Na mgbakwunye, ọkwa nke mmụba ọnụahịa nke ụdị akwụkwọ mpempe akwụkwọ na mpempe akwụkwọ niile na-asọba, na-ekpuchi obosara, ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ, na ịdị elu nke mmụba ahụ, gafere atụmanya ọtụtụ mmadụ.
Ka oge na-aga, mmụba ọnụahịa a abawanyela site na njikọ akwụkwọ na kaadiboodu na njikọ njikọ katọn, ụfọdụ ụlọ ọrụ katọn nwere otu mmụba dị ka 25%. N'oge ahụ, ọbụna katọn ndị ahụ a kwakọbara nwere ike ịrị elu ọnụahịa.
Na February 23, 2021, Shanghai na Shenzhen ọnụ ahịa akụrụngwa bilitere wee daa ngụkọta nke ụdị ngwaahịa 57, bụ ndị lebara anya na mpaghara kemịkal (ụdị 23 na mkpokọta) na ọla ndị na-enweghị ike (ụdị iri na mkpokọta). Ngwaahịa ndị nwere mmụba nke ihe karịrị 5% na-elekwasị anya na ngalaba Chemicals; ngwongwo 3 kachasị elu nwere uru bụ TDI (19.28%), phthalic anhydride (9.31%), na OX (9.09%). Ogologo mmụba kwa ụbọchị na mbelata bụ 1.42%.
Ihe metụtara "ụkọ ụkọ", ọnụ ahịa akụrụngwa dịka ọla kọpa, iron, aluminom na plastik na-arị elu; n'ihi mmechi mkpokọta nke nnukwu ụlọ nrụpụta mmanụ zuru ụwa ọnụ, kemịkalụ kemịkal ejirila ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ofe osisi ... industrieslọ ọrụ ndị emetụtara gụnyere arịa ụlọ, ngwa ụlọ, elektrọnik, textiles, taya, wdg.